BEIJING - Vatongi veChinese vatora matanho matsva ekusimbisa hutongi hwemhando yepamusoro pekutengeswa kunze kwenyika zvinhu zvekurapa uyezve kudzora nzira dzekubuda kubatsira zvirinani kurwa kwepasi rose kurwisa chirwere chekoronavirus (COVID-19).
China ichawedzera hutongi hwekutengeswa kunze kwenyika kweasina kuvhiyiwa kumeso masks, ayo anodiwa kuti asangane nemhando yemhando yeChina kana nzvimbo dzekutengesera kunze kwenyika kutanga kubva Svondo, sekuburitswa kwakabatana kubva kubazi reCommerce (MOC), iyo General Administration. yeCustoms uye iyo State Administration yeMusika Regulation.
Vanotengesera kunze kweasina kuvhiyiwa kumeso masks vanofanirwa kuisa chiziviso chemubatanidzwa cheanotengesera kunze uye anopinza kunze kwenyika kana vachipfuura nekubvumidzwa kwetsika kuti vaone kuti vari kuenderana nezviyero uye hazvizoshandiswe pakuvhiya, maererano nemutemo mutsva.
kn95 mask yakasimbiswa neChina's GB2626-2006 yekufema yekudzivirira mushandisi self-priming sefa anti-particle respirator standard.Iyo yakaenzana neyero yekudzivirira yen95, asi inongotevera zviyero zvekuedzwa kwenyika dzakasiyana.Ngatitarisei kushandiswa kwekn95 masks.
Iko kusefa kwakanaka kwekn95 giredhi masks kune zvimedu zvine aerodynamic dhayamita ≥0.3µm iri pamusoro pe95%.Iyo aerodynamic dhayamita yehutachiona hwemhepo uye fungal spores inonyanya kusiyana pakati pe 0.7-10µm, iri zvakare mukati mekudzivirira kwayo.
Naizvozvo, rudzi urwu rwemask runogona kushandiswa kudzivirira kufema kwechimwe chinhu, senge kukuya, kuchenesa uye kugadzirisa guruva rinogadzirwa nemaminerari, hupfu uye zvimwe zvinhu.Particulate nyaya inokuvadza volatile gasi.
Inogona kusefa uye kuchenesa kunhuhwirira kwakafemerwa (kunze kwemagasi ane muchetura), kubatsira kudzikisa kuratidzwa kwezvimwe zvinofemerwa tupukanana tumarara (senge mold, anthrax, tuberculosis, nezvimwewo), asi hazvigone kubvisa hutachiona hwekusangana, hurwere kana njodzi dzerufu .